FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ESPANIÔLA SPRINGER ANGLISY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Espaniôla Springer anglisy
Becham the English Springer Spaniel amin'ny 10 volana
lohataona-mavo-lohataona-er span-yuh l
Alika antonony sy matevina ny English Springer Spaniel. Mifanaraka amin'ny vatana ny loha. Ny karan-doha malalaka dia salantsalany amin'ny halavany ary fisaka eo an-tampony. Ny halavan'ny loha dia mitovy amin'ny halavan'ny tendany. Mitovy halava amin'ny karan-karandohany ny vava, miaraka amina fijanonana antonony. Ny orona dia aty na mainty, miankina amin'ny lokon'ilay alika. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Ny maso salantsalany sy boribory lavalava dia mety hazelà mainty amin'ny aty sy amboa fotsy na alika mainty misy alika mainty sy fotsy. Ny sofina lava sy malalaka ary pendant mihantona eo akaikin'ny takolaka ary mahatratra ny orona rehefa sintomina. Lalina ny tratra. Ny lamosina dia mitovy amin'ny halavany, mitovy amin'ny haavon'ny alika avy amin'ny tany ka hatramin'ny malazo. Mahitsy ny tongotra eo anoloana, ary mifintina ny tongotra. Voatsindrona matetika ny rambony. Fanamarihana: tsy ara-dalàna ny rambon'ny docking amin'ny ankamaroan'ny faritra Eropa. Ny palitao dia salantsalany amin'ny halavany miaraka amin'ny volom-borona amin'ny tongotra, sofina, takolaka ary brisket. Ny lokon'ny palitao dia misy atiny sy fotsy, ary mainty sy fotsy, fotsifotsy misy marika mainty na aty, manga na aty mierona, endrika tricolor mainty sy fotsy na aty ary fotsy misy marika misy tan, izay matetika hita amin'ny volomaso, takolaka, ao anatiny ny sofina sy eo ambanin'ny rambony. Ireo faritra fotsy amin'ny palitao dia mety misy fikitihana.
Ny English Springers dia alika malemy paika, malefaka, sariaka ary tia fiaraha-monina izay mpiara-mitory zaza mahafinaritra tokoa. Manan-tsaina, mahay, vonona ary mankatò ary mianatra haingana. Mahery fo, milalao, mavitrika, mahafinaritra ary falifaly, ny rambony dia toa mihetsika foana. Izy ireo dia be fitiavana, tsara toetra ary tso-po tia ity alika rehetra ity. Ny lohataona dia manao izay tsara indrindra rehefa miaraka amin'ny olona afaka manome karazana karazana azy ireo izy ireo rafitra tsy miova aiza ny mazava ny lalàna . Ny olana ratsy dia mety hitranga amin'ireo tompona malemy paika sy / na tompona izay tsy manome fanazaran-tena ara-tsaina sy ara-batana isan'andro . Izany dia mety hiteraka fahasosorana amin'ny alika ary mety hanjary izy ireo Handringanana ary manomboka mibontsina be raha avela irery . Raha tsy hitan'ny Springer ho tompon'andraikitra matanjaka ny tompony dia hanomboka hino izy ireo fa anjaran'izy ireo ny mandray an-tanana ny andraikitry ny mpitarika. Raha avelanao hitranga izany dia mety ho lasa bitika ny alika amin'ny fiezahana hitazomana ny olona hilahatra. Ny springers adolescent dia mila fitarihana manam-pahefana maro. Mahatsapa ny feon'ny olona iray izy ireo ary tsy hihaino raha mahatsapa izy ireo fa matanjaka kokoa noho ny tompony izy ireo, na izany aza dia tsy handray tsara ny famaizana henjana. Ny tompon-trano dia mila milamina, nefa manana rivotra voajanahary. Amin'ity taona ity dia mety ho angovo mahery vaika kokoa izy ireo, fitsapana ary fanamby ny toeran'ny mpitarika. Misy karazany roa, tsipika an-tsaha ary tsipika fampisehoana (dabilio). Ny karazan-tsaha dia nompiana ho an'ny asa fihazana sy fitsapana an-tsaha. Ny karazan-dabilio dia namboarina ho fampisehoana fampifanarahana ary manana aty na mainty kokoa amin'ny palitao, ary lava sy feno kokoa ny palitao. Ny karazana saha dia manana fotsy be kokoa amin'ny palitao noho ny karazana fampisehoana sy volo kely kokoa. Ireo karazana roa ireo dia marani-tsaina sy mahery ary mila fanatanjahan-tena isan'andro, fa ny tsipika an-tsaha kosa dia manana haavon'ny angovo avo kokoa ary mila fanatanjahan-tena bebe kokoa aza. Ny haavon'ny fanapahana amin'ity karazany ity dia miovaova na dia ao anatin'ny fako iray ihany aza. Raha tsy ianao ilay karazan'olona afaka maneho rivotra voajanahary milamina, fa fahefana hentitra, dia aza hadino ny misafidy pup izay mora manaiky kokoa. Ny toetran'ny tsipika fampisehoana sy ny tsipika dia samy hafa be, miankina amin'ny fomba itondran'ny tompony ny alika sy ny ohatrinona ary inona karazana fanatanjahan-tena manome izy ireo. Tian'izy ireo ny rano ary mety mando sy fotaka tsy tapaka izy ireo. Matetika izy ireo dia tsara miaraka biby hafa fa satria mpihaza vorona voajanahary dia tsy tokony hatokisana vorona . Indraindray dia afaka mifamaly amin'ny alika hafa izy ireo raha tsy mifampiresaka mazava tsara amin'ny tompon'andraikitra ny tompony.
Haavony: Lehilahy 19 - 21 santimetatra (48 - 56 cm) Vavy 18 - 20 santimetatra (46 - 51 cm)
Milanja: Lehilahy 45 - 55 pounds (20 - 25 kg) Vehivavy 40 - 50 pounds (18 - 23 kg)
Ny Springers anglisy sasany dia mora voan'ny hip dysplasia, PRA, izay misy fiatraikany amin'ny maso, PFK, aretim-dra, epilepsy ary HD. Mora mihena ny lanjan'izy ireo, aza misakafo be loatra.
Hanao tsara izy ireo ao amin'ny trano iray raha toa ka zatra miasa tsara. Ny Espaniôla Springer anglisy dia mifanaraka tsara amin'ny fiainana an-tanàna na an-tanàna. Tsy mihetsika izy ireo ao an-trano ary hanao tsara indrindra amin'ny tokotanin-tsaha farafahakeliny.
Ny lohataona dia mankafy fanatanjahan-tena betsaka araka izay azonao omena azy ireo. Mila betsaka amin'izy ireo izy ireo mba hahasambatra. Tokony hanana fotoana hakana isan'andro izy ireo mandeha lavitra na mihazakazaka izay ahatongavan'ny alika amin'ny voditongony na eo ambadiky ny olombelona, ​​tsy eo alohany velively, toy ny ao an-tsain'ny alika, ny mpitarika no mitarika ny lalana. Izy ireo koa dia handray soa amin'ny fihazakazahana ary milalao ny tadiny. Tian'izy ireo ny maka sy milomano. Ireo alika ireo dia mahavita tsara amin'ny fitsapana fahaiza-manao sy ny fifaninanana fankatoavana.
Ny palitaon'ny Springer karazana saha dia somary mora tazomina ary ny fikosehana tsy tapaka miaraka amin'ny borosy volom-bolo henjana dia hitazomana tsara fa ny palitao Springers dia karazana fampisehoana mila fijerena bebe kokoa. Samy mila fandroana sy shampoo maina fotsiny raha tsy ilaina izany, fa zahao matetika ny sofina raha misy famantarana ny aretina. Ny lohataona manana palitao lava kokoa dia ho matotra raha tsy borosina matetika ary mila jerena manokana ny sofina sy ny tongotra. Raha tsy voaharatra ny volo eo ambanin'ny sofina ny volo, dia mety hitarika aretina amin'ny sofina maharitra. Ny volony amin'ny tongotra dia mila haingoina mba tsy ho simba ny burrs sy ny foxtails. Ny palitao lava kokoa dia haka burrs sy rantsana ary mila kosehina aorian'ny fanaovana fanatanjahan-tena any ivelany raha tsy izany dia ho matotra ratsy. Ny karazana fampisehoana Springer dia tsy manana palitao betsaka toy ny Spaniel Cocker amerikana , fa mila fiheverana tsy tapaka. Ity karazana ity dia mpandroba salantsalany tsy tapaka.
Ny English Springer Spaniel no mpanorina ny espaniola rehetra mpihaza anglisy. Nandritra ny vanim-potoana Renaissance dia noheverina ho namana tsara indrindra ho an'ny mpihaza eoropeanina izy io. Ny lazany tany Amerika dia nanomboka tamin'ny 1700. Ny Clumber , ny Sussex , ny Welsh Springer , ny saha , ny Rano Irlandey , ary ny Cocker Spaniel izy rehetra dia nivoatra avy amin'ny English Springer Spaniel. Raha vao heverina ho mitovy amin'ny Cocker Spaniel , teraka tamin'ny alika iray ihany ireo alika ireo. Ny alika kely dia ny Cockers ary nampiasaina hihaza woodcock. Ny alika lehibe kokoa ao amin'ny fako, ny English Springers, dia nampiasaina handosirana sy hivoahan'ny lalao, ka izany no itiavan'ny alika ny anarany. Ny alika roa dia samy mbola mahay mihaza an-tanety sy rano ary mahay miasa amin'ny borosy, ary manao retriever tsara ihany koa. Tamin'ny 1902 vao nanaiky ny Espaniola Springer Spaniel ho karazana misaraka amin'ny Cocker Spaniel ny Kennel Club of England. Ny English Springer Spaniel English dia neken'ny AKC tamin'ny 1910. Ny English Springer Spaniel Field Trial Association dia niforona tamin'ny 1924 ary ny andrana voalohany dia natao voalohany. Ny talentan'izy ireo dia misy mihaza, manara-dia, mamerina, mpiambina, mazoto, mankatoa mpifaninana ary manao tetika.
Frodo, ilay mpiompy anglisy Springer Spaniel 5 taona, dia mpiandry ondry ary milentika amin'ny fifaninanana DockDogs. Avy amin'ny English Springer Rescue America (ESRA) izy.
Harley the Spaniel Springer anglisy 12 taona— 'Harley dia biby fiompy iray tsy madio. Ny reniny dia nanana laharana tompon-daka ary ny rainy dia nanana razambe fampirantiana. '
Winter Sam any an-tsaha anglisy Springer Spaniel toy ny alika kely amin'ny 10 herinandro— 'Winter Sam dia 10 herinandro. Izy dia saha / miasa Springer Spaniel ary ny ray aman-dreniny dia alika basy avokoa. Niara-nipetraka taminay nandritra ny 2 herinandro izy ary tena manan-tsaina sy tony ho an'ny alika kely mitovy taona aminy. Eto amin'ity sary ity dia eo amin'ny sezantsika manosika taloha i Sam izay tonga haka ny ankizy any am-pianarana. Satria mbola tsy vita vaksiny tanteraka izy dia tsy mahazo mandeha any ivelany fa mieritreritra aho fa tena zava-dehibe ny fahazarany manao fanazaran-tena isan'andro sy ireo toerana horaisiko azy. Amin'ity fomba ity no mahazo ifaneraserana miaraka amin'ny olona sy ny toe-javatra hiatrehany rehefa lehibe izy. Tiako ny tranonkalanao ary nanampy be tamin'ny fanombohana ny tongotra ankavanana ho an'ny maha-mpitarika entana . Faly indrindra aho noho ny fampahalalana momba ny fampianarana ny alika hanaja ny zanakay. '
Mae the Spanish Springer Spaniel amin'ny 5 taona— 'Springer faly sy milalao izy. Tia ny fianakaviany, indrindra ny rahalahiny vaovao. Ankafiziny ny fihazana, nefa tsy misy basy. Eto amin'ity sary ity dia mijery sombin-gisa tonga hiditra amin'ny fipetrahana izy. '
Emily ilay Espaniola Springer Spaniel mipetraka eo anoloan'ny zaridaina.
Essex Marshall ny saha English Springer Spaniel
'Mpankafy lehibe ny tranokalanao aho. Nanaraka ny zavatra niainanao niaraka tamin'ny Bruno ilay alika kely , arahaba soa miaraka aminy. Ity no Merlina antsika ho alika kely 8 herinandro. Manangana azy izahay araka ny fampianaran'i Cesar Millan, ary faly aho milaza fa mahita vokatra tsara. '
'Ity i Harry the English Springer Spaniel. 10 volana izy ary matanjaka be. Tiany hazakazaka miaraka amiko, ary mihazakazaka lava ao amin'ny valan-javaboary . Tiany ny milomano sy mitaingina fiara koa. '
I Winston, alika kely anglisy Springer Spaniel, 2 volana. 'Tena tiany ny milalao amin'ny kilalao sy alika hafa! Tahaka ny fatin'entana mifono volo io !! '
Winston, alika kely anglisy Springer Spaniel amin'ny 2 volana
Hijery ohatra hafa momba ny Espaniola Springer Spaniel
Sary Espaniola Springer Spaniel 1
Sary Spaniel Springer anglisy 2
Alika Spaniel Springer anglisy: sary an-tsokosoko azo angonina
sarin'ny alika shih poo
bulldog frantsay fotsy sy mainty
boribory vava vita amin'ny hareza manga
manao turkey tsara ve ny biby fiompy